ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းမှုအပေါ်မှီခိုခြင်း - အီတလီအင်တာနက်အထောက်အကူပြုအသိုင်းအဝိုင်းမှစိတ်သောကရောက်ခြင်းအသံများ (၂၀၀၉) - Your Brain On Porn
မှတ်ချက်များ YBOP: ဤစာတမ်းသည်သုတေသီတစ် ဦး မှမကြာသေးမီကမှသာကျွန်ုပ်တို့အာရုံသို့ရောက်စေခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့ (နှင့်အခြားသူများ) တူညီသောမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားသောကြောင့်၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည်လိင်ပညာရှင်များကနားမလည်နိုင်အောင်ငြင်းပယ်ထားသည်။ Abstract အောက်ရှိကောက်နှုတ်ချက်များကိုကြည့်ပါ။ (ထိုအအသစ်များလက်လွတ်မထားပါနဲ့ ပိုလီယိုသုတေသနပြုမှုသည်ယနေ့သုံးစွဲသူများ၏လက္ခဏာများကိုအတည်ပြုသည်.)
စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်စွဲ7အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်မရှိ။2(2009): 295-310 ။
ဒီလေ့လာမှုကဆိုက်ဘာ-porn အသုံးပြုသူဇာတ်လမ်းများလေ့လာဆန်းစစ်နှင့်အင်တာနက်ထဲမှာ Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုမျှဝေသူများက Self-အစီရင်ခံအဖြစ်ရောက်သောအဓိကပုံစံများသတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ (ဆိုက်ဘာ-porn မှီခိုမှုအတွက်အီတလီ Self-အကူအညီနဲ့အင်တာနက်ကိုအသိုင်းအဝိုင်း၏ 2000 အဖွဲ့ဝင်များကစလှေတျတျော 302 မက်ဆေ့ခ်ျမှဇာတ်ကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းစနစ်သက်ဆိုင်noallapornodipendenza) ။ သူတို့ဒုက္ခဆင်းရဲ၏အဓိကပုံစံများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်၎င်းတို့၏ Self-defined ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အတိုင်းအတာများနှင့်သရုပ်လက္ခဏာမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်အဖြစ်ဤစာတမ်း, ဆိုက်ဘာ-porn မှီခို၏ဇာတ်လမ်းများအပေါ်တိုက်ရိုက်အာရုံစိုက်။ စုပေါင်းမက်ဆေ့ခ်ျထဲမှာအဲဒီသက်သေခံချက်အရကျနော်တို့ကြောင်းဆိုက်ဘာ-porn မှီခိုအကြံပြုသင့်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသုခချမ်းသာ, လူမှုရေးလိုက်လျောညီထွေ, အလုပ်, လိင်ဘဝနှင့်မိသားစုဆက်ဆံရေးအဘို့အဖျက်သက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်သည်ကိုများစွာသောအစစ်အမှန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအဘို့ဖြစ်၏။
ဒီလေ့လာမှုက cyberdependents (noallapornodipendenza) အတွက်အီတလီ Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စု 302 အဖွဲ့ဝင်များကရေးသားနှစ်ထောင်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုဇာတ်ကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်စဉ် (400-2003) မှ 2007 မက်ဆေ့ခ်ျနမူနာ။ 30-50 မက်ဆေ့ခ်ျအကြားနှစ်စဉ်တစ်ဦးချင်းစီလဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
အများသောသူတို့ကသူတို့အခွအေနေသည်းခံစိတ်သစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့စွဲတင်းမာမှုများ၏ဆင်တူသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာ ပို. ပို. ပို. ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာထူးထူးဆန်းဆန်းများနှင့်အကြမ်းဖက်ပုံရိပ်တွေများအတွက်တကယ်တော့ရှာဖွေရေးအတွက် bestiality ( "devorivivere" #2097) ပါဝင်သည်။
အတော်များများကအဖွဲ့ဝင်များ "လူသေလမ်းလျှောက်" ကဲ့သို့မိမိတို့၏အစစ်အမှန်ဘဝ ( "vivalavita" #5020) တွင် feeling, သုတ်ရည်လွှတ်၏တိုးမြှင့်ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်မရှိခြင်း ( "မရောက်" #5014) အကြောင်းကိုတိုင်ကြား။ အောက်ပါဥပမာ ( "sul" #4411) သူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင် concretizes:
ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့လိင်အကြောင်းစပ်စုမှုဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာဆက်သွယ်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်၊ ငါစပြီးလေ့လာခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့လိင်မှုဆိုင်ရာဝါဒကိုစတင်စကားပြောလာတယ်။ ငါ့ရဲ့ဇနီးကိုဒီအရာတွေထဲကနေကာကွယ်ပေးလိုက်တယ်။ မြင်ကွင်းတစ်ခု - စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောကစားစရာဂိမ်းမှ၊ တစ်နှစ်အကြာတွင် Erotic chat rooms သို့ကျွန်ုပ်၏လည်ပတ်မှုများသည်တကယ့်စွဲလမ်းမှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါညအချိန်တွင်ထ။ PC ရှေ့တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့သည်။ ငါနေ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ညဘက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါ့အလုပ်ကိုစတင်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်။ နေ့ခင်းဘက်မှာပင်ပန်းနေခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကငါ့ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်။ ; သူစိမ်းတွေနဲ့အဲဒီလိုညစ်ညမ်းတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်။
စစ်မှန်သောဘဝကနေပြင်းထန်အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ် compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, စွဲသည်းခံစိတ်, ၏ဤအုပ်စုတွင်အမှုပေါင်းလည်းရှိခဲ့သည်။ ဤအသင်တန်းသားများထဲကအတော်များများ "မှာ-အန္တရာယ်အသုံးပြုသူများသည် / စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်အမျိုးအစားများကို" (Cooper က et al ။ 1999b, p ။ 90) အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ လူငယ်တစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏ပြင်းထန်သောစွဲလမ်း၏အောက်ပါအမှု ( "Filippo" #4754) ပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူး:
ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်ကို install လုပ်ပြီးကတည်းကညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကို chat ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် browsing လုပ်ခြင်းသည်တစ်နေ့တာအတွက်တစ်ခုတည်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ငါနံနက်စောစောသတင်းများသို့ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ဖိုရမ်၌စတင်ခြင်း၊ ထို့နောက်ငါစတင် download ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေခြင်းသည်မြန်ဆန်ပြီးအသစ်အဆန်းမရှိသောအခါစိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသောကျွန်ုပ်၏ပျော်ရွှင်မှုအခြေအနေရှိသည်။ မွန်းလွဲပိုင်းမှာအတူတူပါပဲ…ညနေပိုင်းမှာကျွန်မရဲ့ archive အတွက်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းကိုရွေးပြီးမလိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုပယ်ဖျက်လိုက်တယ်။ နေ့ကောင်းတစ်ခု (သို့) ဆိုးရွားသည့်နေ့တစ်နေ့သည်ကျွန်ုပ် download လုပ်နိုင်သည့် megabytes အရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏လူမှုဘ ၀ ကိုပျက်စီးစေသည်။ တစ်ခုတည်းသောအပြုသဘောဆောင်သည့်အချက်မှာကျွန်ုပ်တွင်ရည်းစားရှိသည်။ သို့သော်သူနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏အမြဲတမ်းအော်ဂဇင်ကိုအတုပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာပြင်သို့ပြန်သွားခြင်းကိုမျှတသည့်နာကျင်မှုအတုများဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ငါအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး၊ အလုပ်နှစ်ခုကနေထွက်လိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဖန်သားပြင်ရှေ့မှာသုံးဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်မပေးခဲ့လို့ပဲ။
နိဒါန်းတွင်အလေးပေးသကဲ့သို့, လူ့အဆင့်တွင်အများဆုံးဒုက္ခဖုံးကွယ်တစ်ဦးအလုပ်ခွင် (Cooper က et al ။ 2002) မှာထိခိုက်ဖြစ်လာသည့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးစွဲအချိန်ကြီးမားသောပမာဏ, ကနေအဓိကအားထား။ အတော်များများက surfers သူတို့များသောအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်တိုတာတွေ ( "lvbenci" #4187) အဖြစ်သူ့ဟာသူတငျပွကြောင်းအလုပ်မှာဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာစွဲဆုတ်ခွာတွေ့ကြုံခံစားဆိုကြသည်။ တခြားသူတွေကိုပိုပြီးမပြီးဆုံးသေးသောလုပ်ငန်းကို၏ Gestalt paraphrase နဲ့တူပုံပေါ်: ( "mandriano" #2559) "ငါသည်ငါ့လေ့လာမှုများပြီးစီးလို့မရပါဘူး"; ( "devovivere" #3600) "ငါသည်ငါ့စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းတင်သွင်းနိုင်ဘူး"; ( "bruja" #2904) "ငါသည်ခပ်သိမ်းသောခန်းခြောက်နေပါတယ်"; ( "fellos" #94) "ယနေ့ငါသည်အခြားအကျိုးစီးပွားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ငါတော့ဘူးလေ့လာကြဘူး, ငါနိမ့်ဆုံးအလုပ်မလုပ်" ။ အတော်များများက surfers ဖြစ်တည်မှု lethargy, ခိုးမရှိဘူးနှင့်အကူအညီမဲ့တဲ့သဘောမျိုးအကြောင်းကိုပြောဆိုသော: "ငါ spineless ဖြစ်၏" ( "mandriano" #2559) ။ အချိန်နှင့်ဘဝအားဤဖြစ်တည်မှုသဘောထားကို Erich Fromm (ဗွန်ဖရန့် 2000, p.64 အတွက်ကိုးကား) ကအောက်ပါကျမ်းပိုဒ်၏ဆင်တူသည်:
ဒီသဘောထားအများအပြားသင်တန်းသားများကိုသူတို့ ( "ap_ibiza" #4200) "ဆိုအငှား porno ကြယ်ပွင့်ထက်လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှု" အဖြစ်ကိုရိပ်မိဘယ်သူကိုမဆိုစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အထွေထွေတန်ဖိုးထုတ်ဖော်ပြောဆိုဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဆိုပါ site ကိုမှမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျသူမြားစှာသောမိန်းမတို့ကိုသူတို့ (Schneider 2000a အတွက်ဆွေးနွေးမှုကိုတွေ့မြင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်သူတို့ကိုမဆိုချစ်ခင်ဖော်ပြသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အများအားဖြင့်မစုံလင်အလောင်းတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုမပြခဲ့ဘူးတဲ့သူတစ်ဦးငွ, စေသော, အထီးကျန်လူနှငျ့အတူအသကျရှငျခဲ့အလားတူခံစားမှုထုတ်ဖော်ပြောဆို , ခ) ။
အတော်များများကသင်တန်းသားများကိုသူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်တင်းမာမှုလွှတ်ပေးရန်အဆုံးစွန်, အစွန်းရောက် image ကိုစောင့်ဆိုင်း, ejaculate နိုင်ခြင်းမှာရှာဖွေနေနှင့်၎င်းတို့၏လက်၌မိမိတို့စိုက်ထူလိင်တံကိုကိုင်ပြီးဓါတ်ပုံတွေကိုနှင့်ရုပ်ရှင်စုဆောင်းနာရီပေါင်းများစွာဖော်ပြထားသည်။ အများသောသူတို့နောက်ဆုံးသုတ်ရည်လွှတ်သူတို့ရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း (supplizio) ( "incercadiliberta" #5026) ကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေကိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိတော့နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ရုပ်ရှင်နှင့်ဓာတ်ပုံများကို၏ compulsive စုဆောင်းခြင်းသူ့ဟာသူပျော်မွေ့ ( "paneintegrale" #5686) ၏အန္တိမရည်မှန်းချက်ဖြစ်လာ: ... ။
လိင်ကွဲဆက်ဆံရေးတွင်ပြဿနာများမကြာခဏထက်ပိုပါတယ်။ လူတွေကသူတို့အကျိုးဆက်စိုက်ထူပြဿနာများ ( "လူ၏ nick" #19), သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက် ( "carlomiglio" #6) နဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိခြင်း, လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အတိုးမရှိခြင်း, ပူ, စပ်အစားအစာကိုစားခဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနဲ့တူခံစားနှင့်ပြီတိုင်ကြား ( "enr65a" #205) သာမန်အစားအသောက်မစားနိုင်ပါ။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်လည်းဆိုက်ဘာမှီခို၏အိမ်ထောင်ဖက်များကဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ်, လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်း ejaculate ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူအထီး orgasm ရောဂါ၏လက္ခဏာများရှိပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက် desensitization ၏ဤအသိကိုကောင်းစွာအောက်ပါကျမ်းပိုဒ် ( "vivaleiene" #6019) တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်:
အတော်များများကသင်တန်းသားများကို "(အိပ်နေစဉ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်း, ဒါမှမဟုတ်အစားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ (" Duke "#12580), နှင့်သူတို့၏စိတ်တွင်ညစ်ညမ်း flashbacks တစ်နေရာအနှံ့နှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်ရှိနေခြင်း၏" Telematics အဆက်အသွယ် "" လိုင်းပေါ် chatting "တွင်မိမိတို့၏အစစ်အမှန်အကျိုးစီးပွားထုတ်ဖော်ပြောဆို vincenzo "#12269) ။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အမျှတစ်ဦးကိုမှန်ကန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပြောဆိုချက်ကိုအမျိုးသမီးမိတ်ဖက်ထံမှအများအပြားထောက်ခံစာများကသံယောင်နေသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း collusion နှင့်ညစ်ညမ်းပုံစံများကိုဤအဇာတ်လမ်းများထဲမှာပေါ်လာပါသည်။ ဤတွင်ထိုအမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမိတ်ဖက်များ၏အများဆုံးဒီကဗျာမှတ်ချက်အနည်းငယ်နေသောခေါင်းစဉ်:
ကျွန်ုပ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်ခြင်းသည်ဤပုံပြင်များမှအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်ဝက်ဘ်တွင်တွေ့ရသော မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟာဒီအဖြစ်အပျက်တွေမရှိဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖန်တီးခဲ့ပေမယ့်သူမမှာစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ သူပြခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကငါ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။ ငါဟာအဲဒီအမျိုးသမီးတွေလိုဖြစ်ရမယ်၊ သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမယ်လို့ခံစားရတယ်၊ မဟုတ်ရင်ငါ့ယောက်ျားကိုကျေနပ်မှုမရှိဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ တခြားအတွေးတွေ (Laura ballarin) မပါဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဘယ်တော့မှမဖန်တီးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာငါကြောက်တယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းအများဆုံးညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ၏တစ်စုံတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အတုဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမကပိုနူးညံ့ကြင်နာမှုလည်းမရှိ, အလောင်းတွေအဘယ်သူမျှမကပိုစုစုပေါင်းအဆက်အသွယ်လည်းမရှိ, သာလိင်အင်္ဂါတစ်ဦးနမ်းသို့မဟုတ်တစ်ပွေ့ဖက် "(အဲဒီမှာဘယ်တော့မှမဖြစ် လူစီယာ gavino ") ။
ငါသည်သူ၏ PC- ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ငါရှိသောကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူကနောက်ဆုံးမှာနောက်တဖန်ငါ့ထံသို့ပိုမိုနီးကပ်စွာရလိမ့်မည်သည့်အခါ, မိမိစိတ်တွင်ပါသမျှကိုအမှိုက်သရိုက်ရပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့် (တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သဘော) လည်းငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်မည်ကိုကြောက်လန့်ဖြစ်၏ သူတို့သညျငါ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ paste လုပ်ထားတဲ့လျှင်အဖြစ်မော်ကွန်းတင်ပြီးပုံများ, တခါတရံတွင်ငါထိုကဲ့သို့သောကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းများနှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လမ်းအတွက်အဲဒီပုံရိပ်တွေကိုအစဉ်အမြဲငါ့အရငျးနှီးဆုံးအချိန်လေး၌ငါ့ကိုညှဉျးဆဲမည်, သူတို့ကို flashbacks တွေ့မြင်ကြသနည်း ( "pornobasta0505") ။
အီတလီမိမိကိုယ်ကိုအကူအညီနဲ့အုပ်စုစေလွှတ်မက်ဆေ့ခ်ျအများစုဟာ, (အစစ်အမှန်ဘဝ၌) salience ၏မော်ဒယ်သည်နှင့်အညီ, ခံစားချက်ပြုပြင်မွမ်းမံ, သည်းခံစိတ်, ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့လူ့ပဋိပက္ခထိုသင်တန်းသားများအားဖြင့် Griffiths ကကတီထွင်တဲ့ရောဂါရှာဖွေမော်ဒယ်ရောဂါဗေဒ၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြကြဘူး (2004) ။
ထို့အပြင် DSM ထဲမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းရောဂါဗေဒ၏တင်းကျပ်သောအဓိပ်ပါယျ, သိသိသာသာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့နာကျင်မှု၏အန္တရာယ်တိုးလာလျှင်, ပိုပြီးအရေးကြီးတာက, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းလည်ပတ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဒေသများရှိမသန်စွမ်းနှင့်ချို့ယွင်းအပါအဝင်ဒုက္ခဆင်းရဲများ၏သတင်းပေးပို့ features တွေ, များစွာသော lists လွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံး။ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအဆင်မပြေရှိလျှင်လူတွေကသူတို့အကြံအစည်ကိုသို့မဟုတ်အပြုအမူကိုကျော်ဒုက္ခရောက်နေလျှင် psychopathology ၏အနှစ်သာရသတ်မှတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူကိုပညာရှင်များအလိုအရ, တစ်ဦးရောဂါဗေဒ (Bootzin et al အတွက်ဆွေးနွေးမှုကိုကြည့်ပါ။ 1993) လည်းမရှိ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး maladaptive အပြုအမူတငျပွနှင့်သူ၏အသက်တာ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်မဟုတ်, အမည်ရ, အလုပ်ဆင်းကိုင်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, အချိန်ပေါ်ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်နှင့်တူသောလျှင်ထို့အပြင်, ဤပုံစံကိုလည်းပုံမှန်မဟုတ်သောအပြုအမူများဝိသေသဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့်ဆိုက်ဘာ-porn မှီခို, ကိုယ်ပိုင်အကူအညီနဲ့အုပ်စုတွင်အီတလီသင်တန်းသားများအားဖြင့်အစီရင်ခံအဖြစ်, လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် Self-အနိုင်ယူပြီးသော maladaptive အပြုအမူညွှန်ပြစေခြင်းငှါ, longlasting နှင့်ပြင်းထန်နေသောယင်း၏ရလဒ်, ကတည်းကဆက်လက်သုခချမ်းသာအပေါ် impinge တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့်များ၏လူ့အသိုင်းအဝုိင်း၏၏ (Carson et al ။ 1999 အတွက်ဆွေးနွေးမှုကိုကြည့်ပါ) ။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျနော်တို့အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သုတေသနနှင့်အတိုင်းအတာများ၏သဘောသဘာဝ၏, ဤရလဒ်များကိုတချို့သတိနဲ့အနက်နိုင်ပါတယ်နောက်တဖန်အလေးပေးသင့်တယ်။ နောက်ထပ်သုတေသနတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနှင့်ပိုပြီးမျက်မြင်လက်တွေ့ခေတ်မီနည်းစနစ်အပေါ်အခွခေံနှင့် / သို့မဟုတ်အုပ်စု၏နောက်ဆက်တွဲထအပေါ်အခွခေံနှငျ့ / သို့မဟုတ်အခြားအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိအလားတူအဖွဲ့များနှင့်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်သုံးပြီးလိုအပ်ပါသည်။
Agar, အမ်, & Hobbs, ဂျေ (1982) ။ စကားပြန်ဟောပြောချက်: cohering နှင့်ရှေးဟောင်းယဥ်ကျေးမှုအင်တာဗျူးများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဟောပြောချက်လုပ်ငန်းစဉ်, 5, 1-32 ။CrossRefGoogle Scholar
Baym, N. (1995) ။ ကွန်ပျူတာ-mediated ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ပေါ်ပေါက်ရေး။ အက်စ်ဂျုံးစ်အတွက် (Ed က။ ), CyberSociety: Computer ကို-mediated ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ရပ်ရွာ (စစ။ 138-163) ။ တထောင်သပိတ်, CA: Sage ။Google Scholar
Berger, AA ကို (1997) ။ ပေါ်ပြူလာယဉ်ကျေးမှု, မီဒီယာနှင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ဇာတ်လမ်းများ။ တထောင်သပိတ်, CA: Sage ။Google Scholar
Bootzin, R. , Acocella, ဂျေ, & Alloy, အယ်လ် (1993) ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ။ နယူးယောက်: McGraw ဟေးလ်။Google Scholar
Carson, R. , Buthcer, ဂျေ, & Mineka, အက်စ် (1999) ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာနှင့်ခေတ်သစ်ဘဝ။ ဘော်စတွန်: Allyn နှင့် Bacon ။Google Scholar
Cavaglion, G. အ (2008a) ။ cyberporn မှီခို၏ Self-အကူအညီနဲ့၏ဇာတ်လမ်းများ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive ၏ဂျာနယ်, 15(3), 195-216 ။Google Scholar
Cavaglion, G. အ (2008b) ။ အားဖြင့်ထုတ်ဝေရန်လက်ခံခဲ့သည် cyberporn မှီခိုအနေနဲ့အီတလီ Self-အကူအညီနဲ့ကို virtual အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း၏အသံများ, ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ (စာနယ်ဇင်းအတွက်) ။Google Scholar
Conrad, P. , & Schneider, ဂျေ (1980) ။ Deviance နှင့်ကျန်းမာရေး။ စိန့်လူးဝစ်: CV ကို Mosby ။Google Scholar
Cooper က, အေ (1998a) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကို millenium သို့ surfing ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 1, 187-193 ။CrossRefGoogle Scholar
Cooper က, အေ (1998b) ။ လိင်ကအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူ။ ခေတ်ပြိုင်လိင်, 32, 1-3 ။Google Scholar
Cooper က, အေ, Boies, အက်စ်, Maheu, အမ်, & Greenfield, D. (1999a) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက်: လာမည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေး။ အက်ဖ် Muscarella, & အယ်လ် Szuchman (Eds ။ ) ၌တည်၏ လိင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ: တစ်ဦးကသုတေသနအခြေပြုချဉ်းကပ်နည်း (စစ။ 519-545) ။ နယူးယောက်: Wiley ။Google Scholar
Cooper က, အေ, Delmonico, D. , & Burg, R. (2000a) ။ Cybersex အသုံးပြုသူများ၊ အလွဲသုံးစားပြုသူများ၊ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive, 7, 1-2 ။Google Scholar
Cooper က, အေ, Golden, G. အ, & Kent-Ferraro, ဂျေ (2002) ။ အလုပ်ခွင်၌အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ - လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနနှင့် ၀ န်ထမ်းများအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်များသည်မည်သို့ထိရောက်စွာတုန့်ပြန်နိုင်မည်နည်း။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive, 9, 149-165 ။CrossRefGoogle Scholar
Cooper က, အေ, McLoughlin, ဗြဲ, & ကမ့်ဘဲလ်, K. (2000b) ။ ဆိုက်ဘာအာကာသအတွင်းလိင်: 21 ရာစုအတွက် update ကို။ CyberPsychology နှင့်အပြုအမူ, 3, 521-536 ။CrossRefGoogle Scholar
Cooper က, အေ, Putnam, D. , Planchon, အယ်လ်, & Boies, အက်စ် (1999b) ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်အထက်ပြုခြင်း: ပိုက်ကွန်ထဲမှာရှုပ်ထွေးလာပြီ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 6, 79-104 ။CrossRefGoogle Scholar
Cooper က, အေ, Scherer, C တို့, Boies, အက်စ်, & ဂေါ်ဒွန်, ခ (1999c) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်မှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာခြင်းမှရောဂါဗေဒဖော်ပြချက်။ professional ကစိတ်ပညာ, 30, 54-164 ။Google Scholar
Delmonico, D. (2002) ။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိလိင် - ဆိုက်ဘာဆက်စ်စွဲလမ်းမှုကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ P. Carnes, & K. အဒမ် (Eds ။ ) ၌, လိင်စွဲလမ်း၏လက်တွေ့စီမံခန့်ခွဲမှု (စစ။ 239-254) ။ နယူးယောက်: Brunner-Routledge ။Google Scholar
Durkin, K. (2004) ။ တစ်ဦးရဲ့သားကောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် milieu အဖြစ်အင်တာနက်။ ဃ Waskul (Ed က။ ) ခုနှစ်, Net.seXXX: လိင်, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ် (စစ။ 131-147) ။ နယူးယောက်: ပတေရုသ Lang ။Google Scholar
Fairclough, N. (2001) ။ လူမှုရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်နည်းလမ်းအဖြစ်ဝေဖန်ဟောပြောချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ R. Wodak, & အမ် Meyer (Eds ။ ) ၌တည်၏, အရေးပါသောဟောပြောချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းလမ်းများ (စစ။ 121-138) ။ တထောင်သပိတ်: Sage ။Google Scholar
Goffman, အီး (1981) ။ ဟောပြောချက်ပုံစံများ, Philadelphia တွင်။ Pennsylvania ပြည်နယ်: Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်။Google Scholar
Greenfield, ဃ (1999) ။ virtual စွဲ: netheads တွေအတွက်အကူအညီ, cyberfreaks, သူတို့ချစ်သောသူ။ Oakland,, CA: နယူး Harbinger ။Google Scholar
Griffiths က, အမ် (1996) ။ အင်တာနက်ကို "စွဲ": လက်တွေ့စိတ်ပညာများအတွက်ပြဿနာတစ်ရပ်? လက်တွေ့စိတ်ပညာဖိုရမ်, 97, 32-36 ။Google Scholar
Griffiths က, MD (1998) ။ အင်တာနက်စွဲ: ကယ့်ကိုမတည်ရှိပါသလား? ဂျေ Gackenbach ခုနှစ်တွင် (Ed က။ ), စိတ်ပညာနှင့်အင်တာနက်: Intrapersonal, လူ့ခြင်းနှင့် transpersonal applications များ (စစ။ 61-75) ။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာ။Google Scholar
Griffiths က, အမ် (2004) ။ အင်တာနက်အပေါ်လိင်စွဲလမ်း။ အဆိုပါဂျနူဌာနမှူး, 7, 188-217 ။Google Scholar
Grinnell, R. (1997) ။ လူမှုရေးအလုပ်သုတေသနနှင့်အကဲဖြတ်: ဘက်စုံနှင့်အရည်အသွေးချဉ်းကပ်မှု။ Itasca: ဒေါင်းအလံ။Google Scholar
Halleck, အက်စ် (1971) ။ ကုထုံး၏နိုင်ငံရေး။ နယူးယောက်: သိပ္ပံအိမ်။Google Scholar
Kittrie, N. (1971) ။ မတူညီတဲ့ဖြစ်ပိုင်ခွင့်။ Baltimore: John Hopkins ။Google Scholar
la Repubblica သတင်းထောက်များ။ (2002) ။ Sessodipendenza: ne Soffre il 5% degli Uomini Italiani ။ la Repubblica, p ။ မတ်လ3(အီတလီ) 15 ။Google Scholar
Langman, အယ်လ် (2004) ။ လနျ့စရာအလှနျပျက်စီးခြင်း: ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း, ပွဲတော်ကြီးနှင့် cyberporn ။ ဃ Waskul (Ed က။ ) ခုနှစ်, Net.seXXX: လိင်, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ် (စစ။ 193-216) ။ နယူးယောက်: ပတေရုသ Lang ။Google Scholar
Moore က, R. , & Gillette, D. (1991) ။ ရှင်ဘုရင်က, စစ်သည်တော်, Magician, ချစ်မြတ်နိုးတဲ့: အရင့်ကျက်ပုလ်၏ပညတ်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို: Harper ကို။Google Scholar
Morahan-မာတင်, ဂျေ (2005) ။ အင်တာနက်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်: စွဲ? disorder? လက္ခဏာ? အခြားရွေးချယ်စရာရှင်းလင်းချက်? လူမှုရေးသိပ္ပံ Computer ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 23, 39-48 ။CrossRefGoogle Scholar
Orzack, MH, & Ross, CJ (2000) ။ virtual sex ကိုအခြားလိင်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့ဆက်ဆံသင့်သလား။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 7, 113-125 ။CrossRefGoogle Scholar
Peel, အက်စ် (1999) ။ အမေရိက၏ရောဂါ: ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်မှုထဲကများမှာပြန်လည်နာလန်ထူဇေလုပ်များနှင့်ကုသမှုစက်မှုလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ဘယ်လို။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို: Jossey-ဘေ့။Google Scholar
Pfohl, အက်စ် (1985) ။ deviance နှင့်လူမှုရေးထိန်းချုပ်မှု images: တစ်ဦးကလူမှုသမိုင်း။ နယူးယောက်: McGraw ဟေးလ်။Google Scholar
Plummer, K. (1995) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံပြင်များပြောပြ: ပါဝါ, ပြောင်းလဲမှုနှင့်လူမှုရေးစကားလုံးများကို။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: Routledge ။Google Scholar
Punzi, V. (2006) ။ io Pornodipendente Sedotto da အင်တာနက်ကို။ Milan - Costa & Nolan (အီတလီဘာသာဖြင့်) ။Google Scholar
Putnam,,, & Maheu, အမ် (2000) ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်အနိုင်ကျင့်မှု - ဝက်ဘ်အရင်းအမြစ်များနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကိုကုသမှုတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း။ အေ Cooper က (Ed က။ ) ၌, ဘာ: အအင်အားစု၏မှောင်မိုက်ဘက် (စစ။ 91-112) ။ Philadelphia တွင်: တေလာနှင့် Francis က။Google Scholar
Rappaport, ဂျေ (1994) ။ ဇာတ်ကြောင်းလေ့လာမှုများ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုံပြင်များ, နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်-အကူအညီနဲ့အခြေအနေတွင်မည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအသွင်ပြောင်း။ အသုံးချအပြုအမူသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်, 29, 239-256 ။CrossRefGoogle Scholar
Rheingold, အိပ်ချ် (1994) ။ က virtual အသိုင်းအဝိုင်း: တစ်ကွန်ပျူတာလောကမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်မှုရှာဖွေခြင်း။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: Minerva ။Google Scholar
Riessman, C. (1993) ။ ဇာတ်ကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Newbury ပန်းခြံ, CA: Sage ။Google Scholar
Sanders, တီ (2008) ။ အပျော်အပါးအဘို့အပေးဆောင်: လိင်မဝယ်သောသူအမျိုးသားများအတွက်။ လက်ပံ: Willan ။Google Scholar
Schneider, ဂျေ (2000a) ။ စွဲ cyberporn အလွဲသုံးစားပြုသူများအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive, 7, 31-58 ။CrossRefGoogle Scholar
Schneider, ဂျေ (2000b) ။ မိသားစုအပေါ်ကျဘာစွဲအပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်: စစ်တမ်းတစ်ခု၏ရလဒ်။ A. အ Cooper ကခုနှစ်မှာ (Ed က။ ), ဘာ: အအင်အားစု၏မှောင်မိုက်ဘက် (စစ။ 31-58) ။ Philadelphia တွင်: တေလာနှင့် Francis က။Google Scholar
Schwartz, အမ်, & တောင်ပိုင်း, အက်စ် (2000) ။ compulsive cybersex: လက်ဖက်ရည်အခန်းသစ်။ အေ Cooper က (Ed က။ ) ၌, ဘာ: အအင်အားစု၏မှောင်မိုက်ဘက် (စစ။ 127-144) ။ Philadelphia တွင်: Routledge ။Google Scholar
သောမတ်စ်, ဂျေ (2004) ။ ကီးဘုတ်နောက်ကွယ်မှ Cyberpoaching: 'ကို virtual ဖောက်ပြန်' '၏ကျင့်ဝတ် Uncoupling ။ ဃ Waskul (Ed က။ ) ခုနှစ်, Net.seXXX: လိင်, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ် (စစ။ 149-177) ။ နယူးယောက်: ပတေရုသ Lang ။Google Scholar
ဗွန်ဖရန့်, ML (2000) ။ အဆိုပါ Puer Aeternus ၏ပြဿနာ။ တိုရွန်တို: Inner City စာအုပ်များ။Google Scholar
လူငယ်တို့, K. (1998) ။ ပိုက်ကွန်ထဲမှာဖမ်းမိ။ နယူးယော့: Wiley ။Google Scholar
လူငယ်, K. , Griffin-Shelley, အီး, Cooper က, အေ, O'Mara, ဂျေ, & Buchanan, ဂျေ (2000) ။ အွန်လိုင်းမယုံကြည်မှု - စုံတွဲနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်ရှုထောင့်အသစ်နှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive, 7, 59-74 ။CrossRefGoogle Scholar